musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Disney Cruise Line nzvimbo nyowani muna 2023
Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • Kurwisa
Mukutanga kwa2023, Disney Cruise Line inodzokera kunzvimbo dzenzvimbo dzinopisa kwazvo muBahamas - kusanganisira chitsuwa chega chega cheDisney, Castaway Cay - pamwe neCaribbean neMexico Riviera, vanofadza vashanyi veese mazera vane imwe-ye-a-mhando zororo ku gungwa. Mhando dzakasiyana dzenzira dzinonakidza dzinozoisa chikepe kumahombekombe kubva kumahofisi epamba eUS anosanganisira Miami nePort Canaveral, Florida; New Orleans; Galveston, Texas; uye San Diego.
Disney Cruise Line ichagadzira kunyangwe kunakidzwa muzuva zvisati zvamboitika nekuwanda kwekubva kuSunshine State kutanga kwa2023, kushanyira nzvimbo dzinopisa munzvimbo dzese dzeBahamas neCaribbean. Ngarava mbiri dzichakwira kubva kuPort Canaveral padhuze neOrlando, Florida, uye yechitatu ngarava ichibva kuMiami. Ngarava yega yega kubva kuFlorida inosanganisira kushanya kuDisney pachivande chitsuwa oasis, Castaway Cay.
Kubva kuPort Canaveral, Disney Wish ichaenda nechikepe muna 2023 nerwendo rwemazuva matatu neane-husiku kuenda kuNassau, Bahamas neCastaway Cay. Ngarava dziri mungarava nyowani yaDisney dzinobatanidza kunakidza kwevaraidzo nyowani uye kutaura nyaya, nebasa risingaenzanisike uye nguva dzemashiripiti dzinodiwa nevaenzi pavanofamba nechikepe naDisney.
Zvakare kubva kuPort Canaveral, iyo Disney Fantasy ichatanga gore nehusiku-nomwe kufamba nechikepe kuenda kunzvimbo dzinoverengeka dzaunofarira muEastern neWestern Caribbean. Uyezve, imwe yakasarudzika-husiku husiku kufamba nechikepe kunosanganisira mazuva maviri muBermuda yakanaka, uko vashanyi vanogona sunbathe pachitsuwa chakachena chejecha mhenderekedzo dzejecha, vanonakidzwa nemitambo yemvura inonakidza kana kuongorora inoyevedza yepasi pevhu Crystal Caves.
Kubva kuMiami, iyo Disney Kurota ichatanga musanganiswa weane- uye mashanu-husiku rwendo rwekuenda kunzvimbo dzinosanganisira Grand Cayman, Nassau, Castaway Cay uye Cozumel, Mexico. Kunyangwe chimwe chisuwa chega chakasarudzika chiri padekiki neakasarudzika mashanu-husiku rwendo rwunosanganisira maviri ekumira kuCastaway Cay.
Pakuenda kwese kuFlorida, vashanyi vanogona kunakidzwa nerwendo rwunopa chimwe chinhu kunhengo yega yega yemhuri, ichibatanidza ruzivo uye kutandara kwenzvimbo dzinopisa, kurerukirwa uye kufadza gungwa regungwa, uye varaidzo yepasi rose uye sevhisi yeDisney. zororo.
Tropical Escapes kubva kuTexas neNew Orleans
MunaNdira naFebruary, iyo Disney Mashiripiti ichafamba nechikepe kubva kuGalveston, Texas, pane akasiyana mana-, mashanu-, matanhatu- uye manomwe-husiku mafambiro kuenda kuBahamas neWestern Caribbean. Tropical chiteshi chekufona pane izvi zvikepe zvinosanganisira Grand Cayman pamwe neCozumel neProgreso, Mexico.
MunaFebruary naMarch, Disney Magic iri "kuenda pasi bayou" kekutanga panguva yekutanga mwaka muNew Orleans. Kubva kubva pamoyo weiyo The Big Easy, pamwe nerwizi rukuru rweMississippi, mana-, mashanu- uye matanhatu-husiku kufamba nechikepe kunoshevedza kunzvimbo dzinopisa dzeGrand Cayman neCozumel.
Asati kana mushure mekufamba kwavo kweDisney, vashanyi vanogona kupinda muCrescent City kuti vanakirwe nekunakirwa kwakasiyana kwechikafu chakakurumbira cheNew Orleans, vafarire mumimhanzi inotapira yemimhanzi yejazz inozivikanwa pasi rese uye vanoona zvinotaridzika uye kurira kwakakurudzira firimu yeanodikamwa. Mwanasikana Wamambo nedatya. ”
Yese ekutanga 2023 Disney Magic nzendo dzinosanganisira mazuva maviri kana matatu mugungwa kuti unakirwe nekunakidzwa kusingagumi, varaidzo, zororo uye ndangariro dziri muchikepe.
Baja Peninsula Getaways kubva kuSan Diego
Disney Wonder inodzokera kuWest Coast, ichifamba kubva kuSan Diego munaKubvumbi naMay. Ngarava dzinoenda kuBaja, Mexico neMexicoan Riviera dzinoendesa vashanyi kumahombekombe ane zuva akazara nehunhu hwakanaka, mabwe anopenya ejecha, kushanya kwekunze kwekushanya uye zviitiko zvinonakidza zvemvura.
Kufambisa ngarava kubva kuSan Diego kunosvika pakureba kubva pamazuva matatu kusvika manomwe. Dzimwe nzira dzekufamba kuenda kuBaja peninsula dzinodaidza guta rinoyevedza remahombekombe reEnsenada, rinozivikanwa nemvura yaro yebhuruu ine mvura ine turu nemakomo ane makomo. Kufamba kwakawanda kunosanganisira kushanya kuCabo San Lucas, nzvimbo yaunofarira ine matombo anoshamisa uye mahombekombe ejecha jena.
Nzendo dzousiku hunomwe dzinoenda nechikepe kuMazatlan, iyo "Pearl yePacific," yakazadzwa nezvishamiso zvinofadza zvechisikigo, tsika dzinobudirira uye nhoroondo ine mavara, uye kuPuerto Vallarta, kupukunyuka kwakanaka kwegungwa kwakakomberedzwa mumugwagwa weBanderas Bay uye kumuganhu ne dzinokatyamadza Sierra Madre makomo.